Laptop kana PC (komputa): zvakanaka uye zvakaipa | TeraNews.net
Laptop kana PC (komputa): zvakunobatsira uye zvakashata
Munyori Tera nhau Yakabudiswa pa 13.03.2019
Iva nesarudzo: laptop kana PC? Usatambisa nguva - mushure mekuverenga chinyorwa, iwe unobva wasarudza zvekutenga.
Laptop kana PC: chechipiri-ruoko
Mune mamiriro ezvinhu, zvishandiso zvinoshandiswa kana zvitsva, kubva kuchitoro - sarudza mutengi. Misiyano chete mumutengo. Uye yakakosha - laptop kana komputa BU ichadhura 2-3 nguva yakachipa pane chitsva. Asi pane 50% mukana wekutadza. Iko kusavapo kweiyo mutengesi waranti inotungamira kunogadzirisa kwemidziyo nekuishandisa kwayo. Naizvozvo, iyo mabhenefiti anotaridzika zvikuru foggy.
Kufambisa. Saizi diki uye uremu, kuvapo kwechiratidziro, vatauri vane maikorofoni uye zvemukati zvekushandisa (touchpad, keyboard), simba rekuzvitora uye kuwanika kune isina waya mitambo. Laptop yacho yakanakira bhizinesi vanhu vanofanirwa kugara vachifamba pakati pekumba uye kubasa. Park, cafe, hofisi, bhizinesi nzendo - nhare mbozha ichava mubatsiri unisens. Kumba, iyo laptop haina kutora nzvimbo patafura. Iko kusipo zvachose kwetambo kunokubvumira kuti ufambise michina uchitenderedza imba. Kune vabereki, laptop ndiyo mhinduro kwayo.
Inoshanda. Laptops anouya aine madhiraivha uye software, uye kazhinji neWindows inoshanda system. Akadzvanya bhatani - uye zvese zvaunoda pane desktop. Kuvapo kwe USB uye vhidhiyo inobuda, inowedzera kushanda kweiyo nharembozha. Zviri nyore kubatanidza tracker kana TV, ekunze keyboard, mbeva, printer, scanner, fakisi. Iyo Laptop, kana ichidikanwa, inoshanduka kuita router inogona kugovera iyo internet kuburikidza neWi-Fi.
Izvo zvisina kukwana kupfeka kupikisa. Iyo laptop iri nyore kukuvadza: kudonha, kupwanya, kudururira zvinwiwa zvinwiwa. Iyo bhatiri, nekushandisa zvisirizvo, inopfeka kunze kwegore, kurasikirwa nemasimba. Iyo yakavakirwa-mukati yekutonhora sisitimu haina kukwana - mushure mekuunganidza guruva kuburikidza nemakona emhepo, iyo Laptop overheats, inogona kupisa kunze.
Kuderera kuchinjika kwazvino. Isa yakangwara SSD drive uye wedzera RAM - iyi ndiyo nzira inorayirwa kuti ikurumidze kukwidza laptop. Asi mushure me3-4 makore ekushanda, mibvunzo ichamuka kune processor nekadhi revhidhiyo, iro rakatengeswa kwazvo mubhodhi rekwaamai chefoni mbozha. Kungotsiva chete laptop - neimwe nzira mashandiro haagone kuvandudzwa.
Makomputa emunhu (maPC): mabhenefiti
Zvinonzwisisika mutengo unogadzirwa. Komputa yacho inoenderana nyore nyore nemabasa emushandisi. Kusvika pakusarudzwa kweakakurumbira mapurogiramu kana mitambo. Zvidimbu zvidimbu zvePC zvinoshandurana, saka nyaya yekuvandudza nyowani inonyangarika. Unoda kuchengetedza nzvimbo pane yako desktop - ndapota diki dzimba. Zviuru zvakasiyana.
Kunakidzwa kwekushandiswa. Kushanda, kutamba kana kubhuroka paInternet muchigaro chakapfava pamberi pekituru hombe chiratidzo chakananga kwekunyaradza kwePC. Iyo kombiyuta inoshanda zvakanyanya maererano nekubatanidza michina yemultimedia. Pfumbi kana kuwandisa - pfungwa iyi isipo, nekushambidzika kwayo kwevhu kwePC guruva (1 kamwe pagore kana maviri).
Komputa dzemunhu: zvakashata
Kuwanda. Monitor, system unit - kana pakaitika kuparara, uchafanira kufonera nyanzvi kumba. Kana zvisina kudaro, pachave nematambudziko nemapulagi paunobatanidza zvakare. Iwe zvakare uchafanirwa kutarisira nzvimbo yebasa - tafura, neruoko, kuvapo kwemagetsi uye nzvimbo yekubatanidza yekubatanidza neInternet.
Kushaikwa kwekutaurirana pasina waya. Kuti ubatanidze kune network yeWi-Fi kana 3 / 4G, unozoda kutenga michina yakakodzera. Kazhinji, komputa inosunga mushandirwi kubasa.
Pasi pane yakadzika: laptop kana PC (komputa)?
Zvemitambo - zvirokwazvo komputa yako pachako. Zviri nyore kusimudzira, hapana matambudziko nekunyanyisa. Hongu, uye ugare XXUMX-4 maawa, kurova vavengi kana kudzivirira humambo hwakanyanya nyore pane kushandisa laptop.
Unofarira kufamba - chete Laptop. Vakashanda kumba - ivo vakavhara chivharo uye ndokuenda kune cafe kana hofisi. Usakanganwa kutarisa bhatiri rairo. Isu tinokurudzira kutenga 2-3 charger: yeimba, hofisi uye kubhadharisa motokari.
Tarisa komputa yevabereki - laptop. Zvese kutaurirana, kufamba, kusununguka kwekushanda. Tenga mbeva kuti ive nyore, sevanhu vakuru havana hushamwari nehuku yekubata.
Vana zviri nani kutenga komputa yako pachako. Iko mukana wekushandura kwemazuva ano, uye kusakwanisika kune zvikamu zvechirongwa chikamu kunowedzera hupenyu hwezvishandiso.
Teclast TBolt 10 - Laptop ine inotonhorera stuffing
Sisitimu Laptop - chii icho, ndeapi matanho
Asus Chromebook Flip CM300 (laptop + piritsi) munzira
ASUS Sky Sarudzo 2 Ryzen 5000 Yemitambo Laptop
Laptops ane GeForce RTX 30xx mifananidzo yemakadhi - Asus vs MSI